Qeybka koowaad ee qoraalkan:-
Jaaliyada Norwey oo ah jaaliyada ugu da`da yar, uguna degitaanka gaaban marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee ku nool dalkan Norwey ayaa dhawaan ku guuleystey howl aan horey loo qaban. Ha noqoto jaaliyadaha kale ee dalkaa ku nool ama qurbajoogta kale ee soomaalaadi ah.
Waxey 25/3-2017 sameeyeen lacag aruurin balaaran oo dalkoo dhan hal mar ka wada dhacdey, oo abaaraha lagu taakuleynayay. Lacag aruurintaa ayaa ku saleysneed nidaamka ah hal maalin, hal konto iyo hal mar. Mudo dhowr saacadood gudahood ayay ku soo aruuriyay lacag gaaraysa 1.026.025 malyan oo u dhiganta 114.900 dolar. Howshaa waxey noqotey howl guul taariikh reebtey. Ku dayashana mudan.
Hadaba howl kastoo la qabtaa bilow iyo dhamaad ayay leedahey. Waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno sidey howshan ku bilaamatey iyo waxa laga bartey.
Markuu sanadku ahaa 2015 ayaan martiqaad aqoomeed u fidiney Dr. Marqan Qassim, hadana ah Wasiirka Arrimaha bini’aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka iyo Prof. Hodan Ciise. Shirarkii ay ka qeyb galeen mid ka ah ayaa looga hadlayay arimaha samafalka iyo waxey ururadan norwegianka ka qabtaan dalka. Waxaa shirkaa ka soo baxey in aan layska warheyn, ha noqoto ururadan dhexdood, ama jaaliyada.
Waxaan sameeney dhamaadkii 2016 madal ka wada dhaxeysa ururadan Norwegianka iyo jaaliayada Soomaaliyeed, oo loo bixiyay `Somali Forum`. Ulajeedada madashaa ayaa ah iska warheyn iyo is aqoon weydaarsi ku saabsan arimaha siyaasada horumarinta iyo kaalmeynta (Aid and development policies). Waxaa madashaa xubin ka ah ururada ay ka mid yihiin: Save Children, Norwegian People’s aid, Red Cross, Development Fund Norway, NRC, ADRA, Norwegian Church Aid, GraceSenter, Xanaano, Midnimo Forum, Somali Youth Network, Ileys women development initiativ, Sagal hjelp to selvhelp, Batalala, Global Network, Gargaar Gurmad, Norsk Somaliland Diaspora Org., Dhool org for civic engagement iyo Somali Peace Award.
Sanadkan bilowgii, janawari, shir ay madashu laheyd ayaa waxaa nooga soo qeyb galey nin u shaqeynayay hay`ada Save the Children, oo booqasho gaaban ku yimid Norwey. Ninkaas oo ahaa hogaamiyaha u qaabilsan arimaha kaalmeynta Bariga Afrika, oo ka warbixiyay xaalada abaaraha iyo meeshey wax marayaan. Xillagaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxey ku mashquulsanaayeen doorashooyinkii, halka aduunka weynaha intiisa kalana aysan aqoon fiican kala socon xaalada abaaraha. Shirkaa ayaan ku go`aansaney in aan isla sameyno war saxaafadeed wada jir ah (anaga iyo iyaga-ururadan Norwegianka), oo dhibkan wacyi gelin ka bixino. War saxaafadeedkii (press release) ayaa ka soo baxey joornaalada dalkan bishii 06. february https://www.adranorge.no/2017/02/frykter-ny-sultkatastrofe/. Halka VOA wareysi ka sameysey http://www.voasomali.com/a/3684284.html – Kuna mahadsan yihiin saacidaada.
War saxaafadeedkaa ayaa labo ulajeedo lahaa in marka hore wacyi gelin abaaraha la bixiyo. Marka xigtana wax laysla qabto. 18/2 mar ay madashu keligeed shir lahaayeen oo ururada Norwegianka ka maqnaayeen ayaan go`aansaney in aan sameyno lacag aruurin abaaro oo dalkoo dhan ah. Maalintana u cayimaney 18/3. Ururadii norwegianka baan war geliyay. Balse waxey nooga cudur daarteen in sharcigooda u saamaxeyn in ay arintan nagala qeyb galaan, hadeysan maamulka lacag aruurinta aysan la wareegeen. Anagana taa waa ku diidney. Oo halkaa bey ururadii Norwegianka ahaa nooga hareen.
Waxaan go`aansaney inaan howshaa keligiin sii wadano, balse ay noqoto howl ku saleysan labo mabda`. (1)- Caawinta walaalaha abaaraha ku dhibaateysan iyo (2)- Muujinta awoodeena tiro iyo tayo ee Ilaah na siiyay. Waxaan dareemayaa inaan labadii ulajeedaba wada gaarney.
Shirkii noogu muhiimsanaa ee madashu yeelato oo dhacey 25/2 ayaa ahaa shirkii howshan dhudubada loogu taagey. Waxaa shirkaa nagala soo qeyb galey hogaamiyaha maamulka Dahabshiil ee Norwey Ahmed Cawad, oo markaa Somaliland ka yimid, noogana waramey xaalada sidey tahey. Waxyaalihii ugu muhiibsanaa oo shirkaa lagu gaarey ayaa ka mid ahaa in Ahmed Cawad loo doortey hogaamiyaha howshan. In maalintii lacag aruurinta loo badaley 25/3, si waqti fiican loogu helo abaabulka howsha. Ururka Xanaano oo ka mid ahaa ururada Somali Forum, heysteyna shatiga lacag aruurin ayaan u dooraney inuu hormuudka howshan noqdaan. Oo kontidooda iyo shatigooda la isticmaalo. In shirkadaha ugu weyn ee dalkan deeq dhaqaale la weydiisto. In masaajidada, gobolada, degmooyinka iyo ururada bulshooyinka la wargeliyo. In baraha bulshada howshan page looga sameeyo, si howsha la wado looga warhelo.
Iyadoo howshu halkaa noo mareyso, ayaa xaflad lagu taageerayay Madaxweynaha Mohamed Abdulahi Farmaajo ka war helney in ay jiraan koox kale, oo iyaguna lacag aruurinta abaaraha isku xilqaamey. Labadayadii kooxood ayaa isu tagey oo ku wada heshiiney, maadaama hal dhib ka wada shaqeynayo, hal meelna wax loo wada, in lays kala wada shaqeeyo. Heshiiskaa markii la gaarey, ayaa loo wada tagey masaajidka Towfiiq, oo ah masaajidka ugu weyn somalida Norwey. Masaajidkii waa soo dhaweeyay howshii, balse 4. sharuud bey nagu xireen hadii aan isla sii wada shaqeyneyno. Afartii sharuud waxey kala ahaayeen (1)- Ogolaanshaha shatiga Xanaano oo loo diro masaajidada. (2) – Cadeyn meel kasta oo lacag laga soo direy inuu masaajidka helo. (3) – Sadex qof oo masaajidka ka socda oo howshan nagula soo biira. (4) – In go’aan guud laysla wada gaari doono marka ay lacagta soo uruurto. Afartii sharuudba isla meeshii ayaa lagu wada ansaxiyay.